နှစ်ကုန်တော့မယ်။ ဘာတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပြန်ခြေရာခံ ကြည့်မိပါတယ်။
အပြင်လောကမှာ ရသင့်တာတချို့ ရခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအချိန် ဒီလိုဖြစ်ရမယ် စသည်ဖြင့် ကြံစည်ခဲ့ပြီးမှ တကယ်ကြီး ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့ ဟာတာတာကြီး ခံစားရတယ်။ အသစ် ဆက်ကြံစည်ရရင်လည်း ဆုံးမှာ မဟုတ်။ ဆရာကေဇော် (မောင်သိန်းဇော်)ရဲ့ “ပန်းတိုင်” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို မကြာခဏ သတိရပါတယ်။
အဲဒီမှာ ဘာမှမရှိဘူး…။” တဲ့။
အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ စာရေးသားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကြိုက်တာတွေ အတော်ရှိလာတယ်။ ဟန်လုပ်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟန်လုပ်လို့လည်း တပြားမှ မရပါဘူး။ အစက ကြိုက်သလိုလို နောက်တော့ မကြိုက်တာမျိုးတွေပါ။ လတ်တလော အထိပါပဲ။ စိတ်မရှည်တာတွေ ဆွဲဆန့်ဖို့လိုနိုင်တယ်။
ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ စာမျိုးတွေကို ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်လို့ တနေရာရာမှာ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်မဖတ်ချင်တဲ့ တချို့ပုံစံတွေကို လျှော့ချပြီး (ဒါမှမဟုတ် ရပ်စဲပြီး) ကိုယ် ဖတ်ချင်တဲ့စာမျိုးတွေကို ရေးနိုင်အောင် ဆက်ရေးဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့စာ ဆိုတာတွေက ဒီလောက်အဆင့်ပဲ မို့ ဒီလောက်ပဲဖြစ်လာတာ ဖြစ်နိုင်သလို ရေးနေရင်းပဲ ဖတ်ချင်တာတွေက ပြောင်းသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျဉ်းနှစ်ကြောင်း ဆုံပြီးတော့မှ တဖြည်းဖြည်း ဝေးသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ပြေးနေတဲ့ မြားတစင်းနောက်ကို နောက်ထပ် မြားတစင်းက လိုက်နေသလိုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ထဲမှာ လူမှုဆက်ဆံရေး သိပ်ညံ့ပါတယ်။ တချို့ တကူးတကတွေကို ရှောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တကူးတကတွေကို မကြိုက်တာနဲ့ တကူးတကမဖြစ်စေဖို့ တကူးတကများ လုပ်နေမိသလားလို့ စဉ်းစားမိပြန်တော့ မကြိုက်ပြန်ဘူး။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ပြောသေးတယ်။ ကိုယ်က ပန်ဒိုရာကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးမှ ကိုယ့်အလောင်းကို ကိုယ် သွေးအေးအေးနဲ့ ကြည့်နေသလိုပဲ ..တဲ့။ ဒီတော့မှ ပန်ဒိုရာ သေသွားပြီလား.. လန့်သွားပါတယ်။ ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သေခါစ ၀ိညာဉ်တွေဟာ ကိုယ်သေပြီဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ တော်တော်နဲ့ သဘောမပေါက်ကြဘူး ဆိုပဲ။
ဒီနှစ်ထဲမှာ ဖတ်သင့်တဲ့ ဖတ်ချင်တဲ့ စာတွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်တာကိုလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ အာရုံစိုက်မရတာတို့၊ စာတစ်အုပ်ဖတ်နေရင်း တခြားတမျိုးကို ဖတ်ချင်လာသလို ဂနာမငြိမ်တာတို့၊ စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီး တွေးငေးနေမိတာတို့၊ ဖတ်တာကို ရပ်ပြီး ရေးဖို့အတွက် ကွန်ပြူတာကီးဘုတ် ကောက်ကိုင်မိတာတို့ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေ များပါတယ်။ စည်းကမ်း နည်းနည်း လိုတယ် ထင်ပါတယ်။ အလုပ်တွေ အိမ်ကို သယ်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ကွက်လပ်တွေ ပိတ်ဆို့ကုန်ရတာကိုလည်း စီမံနိုင်သင့်ပါတယ်။ (ဒီလိုပဲ ပြောတာပါပဲ။)
အင်တာနက်ထဲမှာ တခြားသူတွေရေးတာကို အခါအားလျော်စွာ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမဂ္ဂဇင်း စာစောင်တွေမှာ ရေးနေကြတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာတချို့ အင်တာနက်ထဲ ရောက်လာတာကို တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
ကဗျာဆရာတည်ရ ရဲ့ ဘလော့ဂ်ပါ။ http://www.tyalife.com
ကဗျာဆရာ မြတ်ဝေရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဆရာအတော်များများရဲ့ လက်ရာစုံ စုဆောင်းထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ https://sites.google.com/site/poetmyatwai/
ကျုံတိုင်းရွာဆိုတဲ့ site မှာ ကဗျာဆရာ ငြိမ်းစိုးဦး ရဲ့ ကဗျာတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ http://mizzuri09clysna.multiply.com/
ကဗျာဆရာ အောင်ပိုင်စိုးရဲ့ ဘလော့ဂ် ပါ။ အခြားဆရာတွေရဲ့ ကဗျာတွေကိုလည်း စုဆောင်းထားပါတယ်။
ကဗျာဆရာ မြေမှုန်လွင်ရဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အရေးအသားတွေဆီကိုလည်း အလည်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပို့စ်မော်ဒန် ကျွဲပြဲကြီးကိုတော့ “နေ့များ” ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ရဲရဲကြီး သွားစီးလို့ရတယ် ဆိုပါတယ်။ http://kokzkhine.blogspot.com/
ဒီနှစ်ထဲ အသစ်ပေါ်လာတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ ထဲမှာတော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ရေးနေတဲ့ ကိုချစ်ဖေရဲ့ ပို့စ်တွေကို စပ်စုဖြစ်ပါတယ်။
ရေးချင်လို့ရေးနေတဲ့ ခိုင်စိုးလင်းကတော့ ဘလော့ဂ်ရေးနေတာ ကြာပါပြီ။ ဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်ပါသတဲ့။ သူက အလည်အပတ်နည်းလို့ သူ့ဆီ မရောက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် သူ့ဝတ္ထုတွေ ရင်ထဲရောက်ကြောင်း ပြောပါရစေ။
ဘလော့ဂ် အသစ်မဟုတ်ပေမယ့် အခုတလော ပို့စ်ဟောင်းတွေကို ပြန်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အရေးအသား အတွေးအခေါ်တွေက အပြင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်နေပါတယ်။ (outstanding ကို အရမ်းဘာသာပြန်လိုက်ခြင်း။) စာရေးသူနာမည်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသံထွက်ဖို့ အပေါ်ရှေ့သွားနှစ်ချောင်းကို အောက်နှုတ်ခမ်းပေါ် ဖွဖွလေးကိုက်ရပါမယ်။ ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာ ပြင်ပမှာ ရောက်နေပုံ ပေါ်တယ်။ လာသွားတယ်နော်.. တို့၊ ဟိုလိုထင်တယ် ဒီလိုထင်တယ်.. တို့တော့ လုပ်လို့ မရဘူး။ လူကြီးမင်းနဲ့ပဲ တွေ့ပြီးရင် ပြန်လာခဲ့ပါ။ http://zthegardener.blogspot.com/
အထက်ဖော်ပြပါ link တွေကို ပန်ဒိုရာက ညွှန်းလိုက်မှပဲ သိသွားဖို့တော့ မဆိုလိုပါ။ သိရှိပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ညွှန်းဆိုလိုက်လို့ အညွှန်းခံက ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး။ ကိုယ်မှတ်သားမိတာကို မှတ်မိသလောက် ပြောပြလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ တခြား မေ့ကျန်ခဲ့တာတွေလည်း ရှိကောင်းရှိမယ်။ စိတ်မရှိပါနဲ့။ စိတ်လိုလက်ရ ရှိတဲ့အခါ ဒီလိုစုဆောင်းပြီး ထပ်ရေးကောင်းရေးဖြစ်မယ်။
Posted by pandora at 12:56 AM 12 comments
ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည့် နေရာ၊ ရောက်လာကြသည့် အချိန် တွေက ကွဲပြားကြမည်။ ကိုယ့်ထက် စောသူတွေ ရှိမည်။ ကိုယ့်ထက် နောက်ကျသူတွေလည်း ရှိမည်။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့အဖို့တော့ ကိုယ်တို့ အားလုံး ရောက်ကြတဲ့အခါ ဒီနေရာကနေ အားလုံးကို စုဆုံကြဖို့ပါပဲ။
(မနှစ်က ဒီနေရာမှာ တင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက် တက်ဂ်ပို့စ် အဟောင်းလေးကို ပြန်တင်လိုက်တာပါ။ မင်္ဂလာရှိတဲ့ ၂၀၁၀ သာ ဖြစ်စေဖို့ နှစ်သစ်ဆုတောင်းမချွေခင် ကြိုတင် ကြည်နူးပျော်ရွှင်နိုင်ကြစေချင်လို့ပါ။)
Posted by pandora at 10:47 PM 14 comments
Posted by pandora at 10:02 AM 14 comments
Posted by pandora at 10:42 PM 10 comments
ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်တာ တစ်လနီးပါး ဖြစ်သွားပြီမို့ တခုခု ရေးတင်လိုက်တာပါ။ စာရေးတယ် ဆိုတာ စိတ်လက်ကြည်လင်မှ ရေးနိုင်တာမဟုတ်လား။ စာမရေးနိုင်ဘူး ဆိုတော့ စိတ်မကြည်လင်သေးလို့ (တနည်းအားဖြင့်) စိတ်နောက်နေလို့ လို့ပြောလိုက်တာပါ။ မလန့်ပါနဲ့။
အွန်လိုင်း သိပ်မ၀င်ဖြစ်တဲ့ ကာလအတွင်း လုပ်ဖြစ်တာလေးတွေကတော့…
၂၀၁၂ ရုပ်ရှင်ကို ရုံတင်ပြီးစ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အော်.. ကမ္ဘာက ပျက်ရင် ဒီလိုကြီး နေမှာပါလား လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားအကြောင်း သူများတွေလည်း အတော်များများ ပြောပြီးပြီမို့ သင်ခန်းစာတွေကိုပဲ လိုရင်းတိုရှင်းပြောပါမယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချင်သူများ အတွက် အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
- ကမ္ဘာပျက်ကာလမှာ ရှင်သန်လွတ်မြောက်ချင်တယ် ဆိုရင် လေယာဉ်ပျံ မောင်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ (အခုကတည်းက သင်တန်းတက်ထား လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါပြီ။)
- အရမ်းချမ်းသာတဲ့ ဘီလျံနာသူဌေးတွေနဲ့ သိကျွမ်းထားရင် အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ (ဒါတောင်မှ သူဌေးတွေက နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလောက်တော့ ဦးစားပေးအဆင့် မရောက်နိုင်တာ ရှိတတ်တယ်။)
- နောက်ဆုံးတော့ မိတ်အင်ချိုင်းနားပစ္စည်း ကိုပဲ အားကိုးရပါမယ်။ ရေယာဉ်ကြီးတွေပါ။(အမှားအယွင်းတော့ မခံဘူး။ တခုခုပိတ်ဆို့ရင် ဂျမ်းတွေဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်။)
- ကမ္ဘာပျက်ပေမယ့် Sony က တော့ မပျက်ပါ။ (အခုတလော Apple နောက် လိုက်နေသူများ Sony ကွန်ပြူတာများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများ ပြန်စဉ်းစားရန်။ :P)
(ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို အတူစဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
ဘာပဲပြောပြော ကြည့်ကောင်းတဲ့ကားပါ။ Independence Day နဲ့ The Day After Tomorrow ကိုလည်း ကြိုက်ခဲ့တာမို့ ဒီကားကိုလည်း နှစ်သက်ပါတယ်။ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေက သဘောကျစရာပါ။ ရသအနေနဲ့ကတော့The Day After Tomorrow ကို ပိုခံစားရပါတယ်။
မင်းကိုနိုင် ရဲ့ နောက်ကြည့်မှန် ၀တ္ထုကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုအပေါ် အမြင်တွေကိုတော့ အင်တာနက်ထဲမှာ အတော်များများက ရေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ ရိုးသားမှုကို ခံစားရပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ။ အဲဒီဝတ္ထု မဖတ်ဖြစ်ခင် လီဗျောင်ဟွန်း ပါတဲ့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင် (လုံးချင်း) တစ်ကား ကြည့်ဖြစ်သေးတယ်။ ဇာတ်လမ်းသဘောက နောက်ကြည့်မှန်နဲ့ ဆင်သလိုလို ရှိပါတယ်။ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ထဲမှာ မင်းသားက တောင်ကိုရီးယား အာဏာရှင် လက်ထက်က အရေးအခင်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူက မင်းကိုနိုင်ဝတ္ထုထဲက ဇာတ်လိုက်လိုမဟုတ်ဘူး။ အရေးပါတဲ့ စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ့သား ခပ်ပေပေလူဆိုး၊ ဘာခံယူချက်မှ ရှိလို့မဟုတ်ပဲ သူငယ်ချင်းတွေနောက်ကို ရောယောင်ပါတဲ့ စရိုက်ကို ပြထားပါတယ်။ နယ်မှာ ပုန်းရှောင်နေကြတုန်း အဲဒီက မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပါပဲ။ နောက်တော့ မိန်းကလေးက မြို့ကိုလိုက်လာတယ်။ အရေးအခင်းတွေ ပြန်ဖြစ်ပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ကြ ကွဲသွားကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပါ။ အသေးစိတ်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ကိုရီးယားကား ပီပီ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ပဲ ဦးစားပေးထားပါတယ်။ နောက်ခံသမိုင်းတို့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ တို့က ပြတယ် ဆိုရုံပါပဲ။
လွင်မိုးခရီးသွားနေသည် ဆိုတဲ့ ဗွီဒီယို ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ရှုခင်းတွေ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရိုက်ပြထားတာ လှပါတယ်။ ဒါရိုက်တာနဲ့ အသေအချာ ညွှန်ကြားပြီး ရိုက်တာ မဟုတ်မှန်းတော့ သိနေတယ်။ ဒီလိုအစီအစဉ်ကို ရိုက်ကူးဖြစ်တဲ့ စေတနာက ကောင်းပေမယ့် အင်တာဗျုးတဲ့ အခန်းတွေမှာ လွင်မိုးရဲ့ မေးပုံပြောပုံတွေက အမေးခံရသူ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် သိပ်မလေးစားသလို ပုံစံပေါက်နေတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ချိုချိုသာသာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောဆိုနိုင်ရင် (ခဏသရုပ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့) ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ကိုယ့်အမြင်ပါ။
Wacom Bamboo Pen & Touch ၀ယ်ဖြစ်တယ်။ iPhone လည်း ၀ယ်ဖြစ်တယ်။ (ကြွားချင်တာက အခုမှ ရောက်တယ်။း)) Bamboo နဲ့ အကြမ်း စမ်းခြစ်ထားတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံ တင်လိုက်တယ်။
အခြား ဘာမှတော့ ဆွဲမကြည့်အားသေးဘူး။ သြော်.. ဒီကြားထဲ ချစ်သူပုံတူလေး တစ်ပုံတော့ ခဲတံနဲ့ ဆွဲဖြစ်သေးတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့မဟုတ်။ လက်နဲ့ပါ။ တူတယ် ပြောကြတာပဲ။ (တူရမှာပေါ့။) အဲဒီပုံတော့ မတင်တော့ပါဘူး။ တခြားမိန်းကလေးတွေ သဘောကျသွားမှာစိုးလို့။
အလုပ်များတယ်ဆိုပြီး ရုပ်ရှင်တွေကြည့် ၀တ္ထုတွေ ဖတ်ဖြစ်နေသလား လျှောက်လည်နေသလား လို့လည်း ထင်နေဦးမယ်။ စာရေးဖို့အတွက်ကို အချိန်နဲ့နေရာလပ် မရတာပါ။ အလုပ်ထဲမှာလည်း သိပ်အရေးမပါတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ အလုပ်အကြွေးတွေ အိမ်ကို သယ်ရတာမျိုး ရှိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်နှစ် ကုန်ပြန်ဦးမယ်။
Posted by pandora at 1:21 PM 31 comments
ပုရွက်ဆိတ်က နှံကောင်ကို လွှဲချ
ရွှေယုန်က ရွှေကျားကို လွှဲချ
ဂျယ်ရီက တွမ်ကို လွှဲချတဲ့ ခေတ်ကာလ
လူတကာခြေနင်းဖတ်အောက်မှာ တုံးအအ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပြားရှာတယ်
ငါ့နှလုံးသားကလည်း ဦးနှောက်ကို လွှဲလွှဲချတော့
သမားတော်တွေက ခေါင်းကို စကန် ဖတ်ခိုင်းတယ်
(တကယ်တမ်းဖတ်ရမှာ ရင်ဘတ်ဆိုတာ သူတို့မသိကြဘူး)
မရှိမဲ့ရှိမဲ့ အနုပညာဆဲလ် ဆိုတာများရှိခဲ့ရင် ထိပါးသွားမှာစိုးလို့
ကိုယ့်တရားနဲ့ကိုယ် အဆိပ်ဖြေ အိပ်ခွေနေလိုက်ဦးမယ်။
Posted by pandora at 6:33 PM 19 comments
အင်္ကျီကို ဆွဲဆန့်တယ် ချောင်းဟန့်တယ်
အမှန်ကိုရဖို့ အမှန်ကို အရင်ပေးရမယ်ဆိုတာပဲ
မှန်မှန်စရွှေ့ပါ - လိုက်ရွှေ့မယ် (ဆံခြည်တစ်မျှင်စာမှသည် ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုးတဆုံးအထိ)
နည်းနည်းပါးပါးတော့ လွဲလွဲမှားမှားရှိမတဲ့ (ဗယ်နဲ့ညာ)
မှန်ကို မှန်အောင် အမှန်နဲ့ ပစ်ပေါက်ခြင်း
အင်ပလီမန်တေးရှင်း*က အရင်းအနှီး ကြီးလှတယ်။
(ကဗျာက ပျိုးထားတာ အနည်းငယ်တော့ ကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် ဆီလျော်ပါသေးတယ်။ တင်လိုက်တယ်။)
Posted by pandora at 11:30 PM 18 comments
သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၃) အမှတ် (၄) ထွက်ပါပြီ။ အပြောင်းအလဲ လို့ တကမ္ဘာလုံးက ဟစ်ကြွေးအော်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ဒီတပတ် ထွက်တဲ့ သံလွင်အိပ်မက် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ Theme ကလည်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေကို တ၀ကြီး ဖတ်ရမှာပါ။ ဟာသ ဆိုပြီး အသစ် ကဏ္ဍ တစ်ခု ကို တင်ဆက်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရမယ်။ ထပ်မံညွှန်းချင်တာကတော့ အင်တာဗျူးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေ စွန့်လွှတ်ထားသူတွေရဲ့ နိုင်ငံသားပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အမြင်တွေကို မေးမြန်းထားပါတယ်။
ပန်ဒိုရာရဲ့ နတ်သမီးပုံပြင် နတ်သမီးအိပ်မက် ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေး တစ်ပုဒ် ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မီးရောင်စုံတွေ ဝေ့၀ဲနေတဲ့အောက် တဒိန်းဒိန်း စည်းချက်မှန်နေတဲ့ တီးလုံးအတိုင်း ယိမ်းထိုး က နေချိန်မှာ အဲဒီထောင့်စားပွဲကို သတိထားမိတာ ကြာလှပေါ့။ သူက တခြားလူတွေနဲ့ မတူ။ စားပွဲတွေကြားမှာ ပျံဝဲနေတဲ့ လိပ်ပြာမလေးတွေကို ရိသဲ့သဲ့လုပ်တာ၊ လှမ်းပြီးတို့ထိတာ မရှိ။ စင်ပေါ်မှာ ကနေတဲ့ ကျွန်မကိုပဲ စူးစူးစိုက်စိုက် တချက်တချက် ကြည့်နေတာ (ထင်တယ်) လေ။ ဒါပေမယ့် ပန်းကုံးလည်း တစ်ကုံးမှ လာမစွပ်ပြန်ဘူး။ ပုံစံကတော့ အထာတွေ သိပ်မနပ်တဲ့ မအူမလည်လေးပါပဲ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ခေါင်းဖြီးထားတယ်။ မျက်မှန်လေးနဲ့။ အသားဖြူဖြူ ပိန်ပိန်လေး။ ဆံပင်ဆေးရောင်စုံဆိုးပြီး တီရှပ်ဒီဇိုင်းမိုက်မိုက်တွေနဲ့ လူငယ်တွေကြားမှာ၊ ကြောင်ကြောင်ကျားကျား ရှပ်အင်္ကျီတွေကို အပြင်ထုတ်ဝတ်ထားတတ်တဲ့ လူကြီးလူကောင်းတွေ ကြားမှာ ရှပ်အင်္ကျီဖြူလေးကို လက်ခေါက်ဝတ်ထားတဲ့ သူ့ပုံစံက ကျွန်မ မျက်စိထဲတော့ ထင်းနေတာ။
ညက ရင့်လာတယ်။ နည်းနည်းကြာတော့ လူတွေ တဖြည်းဖြည်း ပါးလျသွားကြပြီ။ တချို့လည်း သူ့အချိန်းအချက်နဲ့သူ။ သောကြာစနေ ညတွေလို မဟုတ်လေတော့ ညဉ့်နက်တဲ့အထိ နေကြတဲ့လူတွေ သိပ်မများဘူး။ တီးဝိုင်းသမားတွေလည်း ညောင်းညာစပြုပြီ။ ကျွန်မလည်း အ၀တ်အစားလဲပြီး ပြန်ဖို့လုပ်နေတုန်း စားပွဲထိုးကောင်လေးက တိုးတိုးလာပြောတယ်။ တကယ်တော့ ဒီညအဖို့ နားချင်နေပြီ။ ကျွန်မလို အနေအထားအတွက်က အလုပ်ဆိုတာ အငန်းမရ လက်ခံနေစရာ မလိုတော့ဘူးလေ။ ဘယ်သူလဲ လို့ မေးလိုက်တော့ အင်္ကျီဖြူနဲ့ အဲဒီတစ်ယောက်ကို မေးထိုးပြတယ်။ တစ်ရှိုး.. ပဲတဲ့။
သူ ဒီလောက်အထိ ခြေလှမ်းရောက်လာတာ ကျွန်မ နည်းနည်းတော့ အံ့သြပါတယ်။ သူ့ပုံစံ သူ့အရွယ်က ခပ်ပျော်ပျော် သူဌေးသားလေးတွေနဲ့လည်း မတူသလို ဘယ်လိုရှာဖွေလို့ ဘယ်လောက်ပေါနေမှန်းမသိတဲ့ ငွေတွေကို လာဖြုန်းလေ့ရှိတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ ပုံစံနဲ့လည်း ကွဲပြားနေတယ်။ ကျွန်မလို အနေအထားမျိုးကို ရဖို့က နည်းနည်းတော့ တတ်နိုင်မှ ဖြစ်မယ်။ တကယ်ဆို ကျွန်မရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရဆိုရင် ဒီညအဖို့ ပန်းကုံး လေးငါးကုံးလောက်မှ လာစွပ်ထားတာမဟုတ်ရင် လက်ခံစရာ အကြောင်းကို မရှိဘူး။ ဒီလိုနေရာမှာ ဒီလောက် လွယ်လွယ်နဲ့ ရတယ် ထင်နေသလား။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာတာနဲ့ ကျွန်မ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်ကိုသွားမလဲ…။ ကျွန်မက မေးလိုက်တော့ သူက မျက်နှာလွှဲနေတယ်။ သူ့ဘေးက တရုတ်ပုံစံလိုလို သူ့သူငယ်ချင်းနားကိုပဲ တစ်ခုခု တိုးတိုး ကပ်ပြောတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းကတော့ သွက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မကို ဟိုတယ်တစ်ခု နာမည် ပြောပြတယ်။ အိုကေ..ပေါ့။ သူ့သူငယ်ချင်းက ကားမောင်းတယ်။ သူက ရှေ့ခန်းမှာ သူငယ်ချင်းဘေးက ထိုင်တယ်။ ကျွန်မက နောက်ခန်းမှာပေါ့။ လမ်းတလျှောက်လုံး ကားပေါ်မှာရော အခန်းထဲ ၀င်လာတဲ့အထိရော သူက ကျွန်မကို စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဘူး။
တံခါးကို ပိတ်လိုက်ပြီး သူ့ရှပ်အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပေးဖို့ ဆိုးဆိုးဆတ်ဆတ်နဲ့ လက်ပြင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူက ခဏနေဦး လို့ အလန့်တကြား တစ်ချက်အော်တယ်။ ပြီးတော့မှ သူ့ပါးစပ်ကို သူအုပ်ပြီး ရှူးတိုးတိုး လို့ သူကပဲတပြန် ကျွန်မကို လာပြောတယ်။
Posted by pandora at 12:53 PM 22 comments
Posted by pandora at 12:23 AM 18 comments
Posted by pandora at 2:57 PM 24 comments
အမုန်း အငြိုး အာဃာတ
ကြိုတင် တဖက်သက် ဆုံးဖြတ်မှုတွေနဲ့
တချိန်လုံး တတွတ်တွတ် လွယ်ပိုးထားစဉ်
မာတုဂါမက မြစ်ကမ်းမှာ ကျန်ခဲ့ပြီလေ.. အရှင်။
Posted by pandora at 12:07 AM 22 comments
ကိုယ့်ဘာသာရေးနဲ့တော့ မဆိုင်ပါ။ Pet Society မှာ ဒီလိုဆန်ဆန်ပုံလေးတွေ့တာနဲ့ စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ပျော်လို့ ဆွဲလိုက်တာ။ထုံးစံအတိုင်း Paint ထဲမှာ mouse နဲ့။ ကြိုက်ရင် ယူသွားလို့ရပါတယ်။
Posted by pandora at 1:09 AM 19 comments
"ကမ္ဘာပျက်ခါနီး တစ်လလောက်အလို" ဆိုပါတော့...
ဘယ်လိုတွေ ခံစားတွေးတောမိမလဲ...ဘယ်လိုတွေနေထိုင်ကြမလဲ... မအိန္ဒြာက အိနြေ္ဒကြီးနဲ့ တက်ဂ်လာပါတယ်။
ရယ်စရာကောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပါ။ မစ္စတာ Bean တို့၊ Ben Stiller တို့။ ငပေါများဂေဟာက ပေါညီတို့ ဆိုရင်လည်း လက်ခံပါတယ်။
ဘယ်လိုလေးများလဲ။ ဘယ်လိုကြီးများလဲ။ ဘုရားပွဲမှာ ချားရဟတ်စီးတာထက်တော့ ရင်ခုန်စရာကောင်းမှာ သေချာတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားတာနဲ့ ထလိုက်ထိုင်လိုက် မီးဖိုချောင်ထဲဝင်ပြီး လုပ်မိလုပ်ရာ တခုခု စားလိုက်သောက်လိုက် ဖြစ်နေမယ် ထင်ပါတယ်။
Charging အပြည့်သွင်းထားတဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ ဗွီဒီယိုကင်မရာ ကောင်းကောင်းပေါ့။ မသေဘဲ ကျန်ခဲ့ရင် ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြစားရမယ်။ အဲဒီလို စီးပွားရေး အကွက်မြင်ရတယ်။
ဖြစ်လာမယ့်နေ့မှာ အင်တာနက်ကြီး shut down ဖြစ်နေမှာကို ၀မ်းနည်းတယ်။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေလည်း ပြတ်နေမှာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ .. အဲဒီဘက်မှာ ဘယ်လိုနေလဲ၊ ဒီမှာတော့ ဘာဖြစ်နေပြီ … ဘာညာ အွန်လိုင်းကနေ ပွားနေရရင် ကောင်းမှာ။ ကော်နက်ရှင် ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ အဖြစ်အပျက် ဓာတ်ပုံတွေ live တင်လို့ရရင်လည်း ကောင်းမှာ။
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့မှာကို…။ ဖြစ်ပျက်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်တွေ ဘယ်လိုလုပ် ရှင်းမလဲ။ တို့က ခါးချိုးပြီး အလုပ်ကြမ်းကြမ်း တသက်လုံး လုပ်ဖူးတာမဟုတ်ဘူး။
ဘက်ထရီအပိုတွေပေါ့။ လျှပ်စစ်မီးက တော်တော်နဲ့ ပြန်ရဦးမယ် မထင်ဘူးလေ။
တလလောက်ကြိုပြီး ကျောက်တုံးကောင်းကောင်းပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ သေသေချာချာထွင်းပြီး ရေးခဲ့ဖို့လုပ်ရမယ်။ ရေးတာကတော့ ဘာစာဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ရေးသူနာမည်က ခပ်ကြီးကြီး ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ သက်ရှိတွေ ပြန်ပေါ်လာပြီး နှောင်းလူတွေ ပြန်တူးဆွမိတဲ့အခါ အရင်ကမ္ဘာက ပန်ဒိုရာကျောက်စာ ဆိုပြီး ကျောင်းတွေမှာ သင်ရစေ့မယ်။
(ဂ)။ တွေးမိတွေးရာ အတွေး
သေသွားရင် ငရဲပြည်ရောက်မှာလား နတ်ပြည်ရောက်မှာလား။ ငရဲပြည်ရောက်ရင်တော့ ဟိုလူကြီးနဲ့ ပြန်ဆုံနေဦးမလား မသိ။ နတ်ပြည်မှာတော့ အင်တာနက် ရှိပါ့မလား။
ကမ္ဘာကြီးပျက်ခါမှပျက်ရော အထူးတလည် အံ့သြနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒါတွေဖြစ်လာမယ်လို့ တကမ္ဘာလုံးက အခုလို ကြိုသိထားပြီးသားပဲလေ။ တို့လူသားတွေကွ။ ဟင်းဟင်း။
အလုပ်ထဲမှာ ပရောဂျက်တွေ Deadline မမီတာ ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့် မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ ကမ္ဘာပျက်တာကို လွှဲချလိုက်လို့ရပြီ။ ဟဲဟဲ။
(၁၁)။ ကျူးရင့်ချင်တဲ့ ဥဒါန်း
တစ်ဆယ်.. ကိုး.. ရှစ်.. ခုနစ်… ခြောက်… ငါး…. လေး…. သုံး-နှစ်ပိုင်းတပိုင်း… သုံး… နှစ်-နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း.. နှစ်-လေးပိုင်းတစ်ပိုင်း.. နှစ်…. အဲ.. ပြီးတော့.. အဟမ်း..
မသက်ဝေကို တက်ဂ်ချင်ပါတယ်။ (သူက ကြောက်တတ်ပုံပဲ။ ပိုးဟပ်တောင် ကြောက်တာ။)
ပုံရိပ်ကိုလည်း တက်ဂ်ချင်ပါတယ်။ (သူက ခပ်တည်တည်နဲ့။)
ကိုဇာဇာ ကိုလည်း တက်ဂ်ချင်ပါတယ်။ (သူက ပိုတည်တယ်။)
Posted by pandora at 12:20 AM 31 comments
ကိုဆောင်းယွန်းလ က သတိတရ ရေးခိုင်းလာပါတယ်။
ဆိုညည်းခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေက ဒီအရွယ်အထိဆိုရင် အများကြီးပေါ့။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ.. မောင်နှမတွေနဲ့ အတူတူ အိမ်ရှေ့ ၀ရံတာလေးမှာ.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးထွက်ရင် ဟိုင်းဝေးသွားတဲ့ ကားပေါ်မှာ… ။
မြန်မာသံစဉ်တွေထဲမှာ ကလေးလေးဘ၀က စပြီးကြားဖူးတဲ့သီချင်းကတော့ ချောကလျာ ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ အိပ်ခါနီးတိုင်း အဲဒီသီချင်းကို ဖေဖေကဆိုပြီး သိပ်လေ့ရှိတယ်။ အငယ်ဆုံး ညီမလေး မွေးလာတော့ သူ့ကို ကိုယ်က ဆိုပြီးသိပ်တဲ့ သီချင်းကတော့ ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ။ ညီမလေးကတော့ အဲဒီသီချင်းကို ပန်းသီချင်း လို့ခေါ်တယ်။ ညီမလေးကို ချော့သိပ်ဖို့ အဲဒီသီချင်းကို ခဏခဏ ဆိုပေးရတာပေါ့။
ဂစ်တာတီး မတောက်တခေါက် စသင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ အစ်ကိုတွေမောင်တွေနဲ့အတူ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်းတွေကို အများဆုံး ဆိုညည်းဖြစ်တယ်။ (အခုတော့ လုံးဝမတီးတတ်တော့ပါ။) ရော့ခ် ဂီတ ဆူဆူညံညံ တချို့ကိုလည်း ဇော်ဝင်းထွဋ်တို့ လေးဖြူတို့ ကျေးဇူးနဲ့ ခံစားတတ်ပြီး နှစ်နှစ်သက်သက် လိုက်အော်လာတတ်လာတယ်။
တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တဲ့ တလျှောက်မှာ ချစ်ရက်ရှည်ရှည် အင်းလျားမြေ တို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းက ငွေလမင်း တို့၊ အဓိပတိလမ်းက ခြေရာများ တို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ ဆိုညည်းကြ။ မကေသွယ်ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ သီချင်းတချို့ကို ပြန်တွေ့တော့ လွမ်းသွားတယ်။
မြန်မာသီချင်းဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်သီချင်းဖြစ်ဖြစ် သံစဉ်တွေမက စာသားတွေကို ပိုပြီး တွေးတော ခံစားတတ်လာခဲ့တယ်။ အိမ်မှာ သီချင်းတွေဖွင့်ပြီး ကာရာအိုကေ လိုက်ဆိုတဲ့ကာလ တွေရှိခဲ့တယ်။ တခါတခါ ကက်ဆက်ခွေနဲ့ အသံသွင်းတယ်။ ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်နားထောင်တယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကိုယ့်အဖို့မှာကား အလှတရား ကိုယ့်အနုပညာပါ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်များ ကိုယ့်ဖန်တီးမှုများသာ ….. ဆိုတဲ့ အလှသစ္စာတရား သီချင်းလည်းပါတယ်။ မရွှေပြည်သူ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတဲ့ ရွှေလည်တိုင် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးလည်းပါတယ်။ သင်္ကြန်မိုးထဲက နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှ လည်းပါတယ်။
နောက်တော့ သီချင်းတွေကို နားမထောင်ဖြစ်သလောက်၊ ပါးစပ်ကနေ ထုတ်မညည်း မိသလောက် ပြတ်လတ်သွားတဲ့ အချိန်တွေရှိခဲ့။ တချို့သီချင်းတွေက နားမထောင် ချင်တော့တာမျိုး။ ပြန်မကြား မခံစားနိုင်တော့တာမျိုး။ အချိန်တွေ နေရာ မလပ်တော့တာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ တနေ့ လန့်နိုးလာပြန်တယ်။
စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ တယောက်သောသူအနမ်း ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကနေ သီချင်းတချို့ရဲ့ စာသားတွေကို ထိရှခံစားဖြစ်လာတယ်။ နှုတ်ဖျားမှာ ရင်ထဲမှာ မြန်မာသီချင်း နိုင်ငံခြားသီချင်း တချို့ကို အထပ်ထပ် ဆိုညည်းခဲ့တဲ့ ကာလတွေ ရှိခဲ့ပြန်တယ်။
နိုင်ငံခြားသီချင်းကို မြန်မာစာသားနဲ့ လိုက်ဆိုလို့ရအောင် ဘာသာပြန် ကြည့်ဖူးတာကတော့ နှစ်ပုဒ်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက Way back into love ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ကိုတော့ ဒီဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲ ပေါ့ပါးလိုက် လေးလံလိုက်မဟုတ်လား။ လတ်တလောကို ပြောရရင် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ဆုံးပါးသွားတော့ နှစ်သက်မိတဲ့ သူ့သီချင်း တချို့က နှုတ်ဖျားပြန်ရောက်လာတယ်။
ဆိုတဲ့ အပိုဒ်လေးကို အထပ်ထပ် ညည်းဆိုနေမိတယ်။
အခုနောက်ဆုံး ရင်ထဲမှာ ၀င်နေတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ အိမ် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ အဆိုတော် ဓိရာမိုရ် ဆိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ရေးသူကတော့ သူကိုယ်တိုင်လား သူ့အစ်ကို အကြည်တော်လား အသေအချာ မသိပါ။ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လို့ ထင်မိတယ်။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း စာသားအဓိပ္ပါယ်ရော သံစဉ်ပါ လှပလို့ နှစ်သက်မိပါတယ်။။ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေနဲ့လည်း ထပ်တူကျနေတယ်။
ရံရွေလယ် ထည်ဝါစွာ ဆင်စွယ်နန်းအိမ်
နှလုံးသားတွေ နွေးထွေးရင် ဒါဟာလည်းအိမ်
အိမ်တစ်အိမ်မှာ မှီတည်ရာ ဘာသာတရားတွေ
ကမ္ဘာမြေကို ဖြူစင်စွာ အကြင်နာမျှဝေ
ပိုင်ဆိုင်ရာ တွယ်တာရာ ဒီရင်သွေးတွေ
ဆည်းလည်းသံ လှိုက်ခတ်စေ ဒီချစ်ခြင်းတွေ
ကမ္ဘာမြေမှာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ဆောက်ကြမယ်လေ...။
မြင့်မြတ်ခြင်းတွေ ၊ နွေးထွေးခြင်းတွေ
ကမ္ဘာမြေမှာ ညင်သာစွာ စီးဆင်းဖို့လေ...။)
ကိုယ်တိုင်ထွန် ၀ါချည်မျှင် ဖျင်တဘက်ရယ်
အိမ်အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်ထွန် ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့
စပါးရိတ်ချိန် ၀ိုင်းဖွဲ့ မယ့် ဆန်အရက်ရယ်
ဒီအချိန်ဆို အိမ်အပြင်မှာ ကဗျာတွေရွတ်မယ်
လာပါကွယ် အိမ်အပြင်မှာ ဂစ်တာတီးမယ်
ချစ်မိတ်ဆွေ စည်းချက်ညီ အတူတူကမယ်
ကမ္ဘာမြေမှာ ညင်သာစွာ စီးဆင်းဖို့လေ)
ရင်ခွင်မှာ ရှင်သန်ရာ ခိုမှီရာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ကမ္ဘာမြေမှာတည်ဆောက်ကြမယ်
အဆောင်အယောင်တွေ မဆင်ယင်ချင် ရင်ခွင်အိမ်ပျော်ရွှင်ပါစေ
ဒဏ္ဍာရီရာဇ၀င်လို ၀ိညာဉ်အိမ် စိန်စီရာ ရတနာခြယ် သိင်္ဂါရီအိမ် ...
မနာလိုတဲ့ မစ္ဆရိယ ချည်နှောင်မှုမဲ့
ကံစီရင် ယုံကြည်စွာ ကမ္ဘာမြေမှာ...
ရဲရင့်လိုက် ...ချစ်တဲ့အိမ် တို့ဆောက်ကြမယ်...
ကမ္ဘာမြေမှာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ဆောက်ကြမယ်လေ
005 Home 002.mp3 - diyamo
Posted by pandora at 10:37 AM9comments
Labels: essay, music, personal
၂၀၀၉ ရဲ့ ဂျွန်လရက်စွဲတွေမှာ အရှေ့ဥရောပက မြို့လေးတမြို့ကို စိတ်ကူးထဲ ပြန်ပုံဖော်ကြည့်လိုက်တယ်။ မြို့လယ်ခေါင်ရင်ပြင်မှာ လူတွေဟာ စိတ်အေးလက်အေး အပန်းဖြေရင်း စကားဝိုင်းဖွဲ့ နေခဲ့ကြမယ်။ ရုပ်တုတွေ အောက်က လှေခါးထစ်တွေပေါ်မှာ။ တန်းစီခင်းကျင်းထားတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေ ထဲမှာ။ မလှမ်းမကမ်းက ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှာ။
ရင်ပြင်ထောင့် တနေရာမှာတော့ အရောင်စိုတောက်တဲ့ ပန်းမျိုးစုံ ခင်းကျင်းထားတဲ့ ပန်းဆိုင်တွေ ရှိမယ်။ အဲဒီနားမှာ ခိုတွေက ၀ိုင်းစုပျံသန်းလိုက် နားလိုက်ပေါ့။ သလင်းကျောက်ဝါနဲ့ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချပေးတဲ့ ဈေးဆိုင်တန်းတွေမှာတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေက ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်ရှုနေကြမယ်။ လမ်းဘေးမှာ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးချင်းဖြစ်ဖြစ် ဖျော်ဖြေနေတဲ့ အပျော်ထမ်း တီးခတ်တေးဆိုနေသူတွေကို တချို့က ငေးကြည့်နေမယ်။ နွေရာသီရဲ့ ကောင်းကင်က ကြည်လင်နေပါလိမ့်မယ်။ မိုးဖွဲဖွဲနဲ့ အုံ့ရုံလေးအုံ့ နေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။
ပိုလန်နိုင်ငံ ရဲ့ ချုပ်နှောင်တင်းကျပ်တဲ့ စနစ်တခု ကျဆုံးခဲ့ရတာ၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာ အနှစ်နှစ်ဆယ် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။
“၁၉၈၉ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ အခုတော့ သမိုင်းမှတ်တိုင်မှာ အထင်ကရ ကျန်ခဲ့ပြီလေ” အခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် တစ်ယောက်ယောက်က ဒီလိုမျိုး ပြောပြနေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ “ဒီကနေ့ ပိုလန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်ထဲက ပိုလန်ပါ”
CIA Factbook မှတ်တမ်းအရဆိုရင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ပိုလန်ဟာ ကမ္ဘာ့ ပို့ကုန်တင်သွင်းမှုမှာ အဆင့် ၂၂ ရှိခဲ့တယ်။ သြစတြေးလျ နဲ့ အိန္ဒိယ တို့ကိုတောင် သာလွန်ခဲ့တယ်။ ဥရောပရဲ့ စီးပွားရေးမြေပုံမှာ ထင်ရှားတဲ့ နေရာတစ်နေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီ။ ကွန်မြူနစ်စနစ်အောက်က တင်းကျပ်တဲ့ မီဒီယာချုပ်ကိုင်မှုတွေဟာလည်း အခုတော့ အနှစ်နှစ်ဆယ် အဝေးမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ပြဿနာတွေကိုလည်း အတိုင်းအတာတခုအထိ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီ။
ကမ္ဘာစစ်တွေရဲ့ ဒဏ်ကို အကြီးအကျယ်ခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံလေးမှာ၊ စနစ်ဆိုးတစ်ခုနဲ့ နုံနုံနဲ့နဲ့ ခရီးဆက်ခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံလေးမှာ၊ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်ဆယ်က ဘယ်လို မြော်မြင်မှုမျိုး ရှိခဲ့သလဲ။ သူတို့ရဲ့ လွတ်မြောက်မှုကို သူတို့ကိုယ်တိုင်က စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ လူမှုဘ၀တွေကို ထူထောင်နိုင်ဖို့ “လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေကို အင်အားကောင်းလာအောင် ပျိုးထောင်ခြင်း” ဟာ သူတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု လို့ ဆိုပါတယ်။ လူထုကို အောင်ပွဲခံစိတ်ဓာတ် ရလာဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ “Solidarity” ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောခဲ့တယ်။
၂၀၀၉ ရဲ့ ဂျွန်လ ၄ ရက်မှာပဲ ကမ္ဘာ့မြေပုံထဲက အထင်ကရ အခြားနိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံရဲ့ မြို့လယ်ရင်ပြင် တခုမှာတော့ လူတချို့ဟာ သွေးညှီနံ့တွေကို ပြန်ခေါ်သတိရနေလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ အသံတွေဟာ တုန်ယင်နေမယ်။ ကျစ်လျစ်ထားတဲ့ လက်သီးဆုပ်တွေ မဖြည်သေးသူတွေ ရှိလိမ့်မယ်။
“တိမ်ယင်မင် ရင်ပြင် အရေးအခင်း” လို့လူသိများခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်က ပေကျင်းမြို့ ရဲ့ အဲဒီရင်ပြင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအနှစ်နှစ်ဆယ် နောက်ပိုင်း ယနေ့နဂါးကြီးဟာ အခိုးအငွေ့လျှံနေတဲ့ မီးတောက်တွေ နဲ့ လူးလွန့်အားကောင်းလာခဲ့တာကို တွေ့ကြရမယ်။ ဒီတော့ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီလဲ။ သူတို့ ဘာတွေရခဲ့ပြီလဲ။ ဒီ့အတွက် ဘာတွေကို လျစ်လျူရှုခဲ့သလဲ။ ရခဲ့တာတွေက ဘယ်လောက်အထိ အားကောင်းခိုင်ခန့်လာဦးမလဲ။ လူတွေ လိုချင်တောင့်တခဲ့တာ ဒါပဲလား။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလား မေးခွန်းထုတ်သံတွေ ဆူညံနေသေးတယ်။ မဟာတံတိုင်းကြီးပေါ်က လွင့်နေတဲ့ တိမ်တွေကို အရောင် လိုက်ဖမ်းရနေသလိုပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာလုံးလုံးကြီးပေါ်မှာ သမိုင်းမြစ်တွေက အတူတူ စီးဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက် ဆင်တူတွေက တချို့နေရာတွေမှာ တပြိုင်နက်ဖြစ်စေ မရှေးမနှောင်းဖြစ်စေ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ကျရှုံးခဲ့တယ်။ ရပ်တန့်ခဲ့တယ်။ ဆက်လက်နေခဲ့တယ်။ အားကောင်းလာခဲ့တယ်။ အားပျော့လာခဲ့တယ်။ လမ်းကြောင်းတွေ ဖြောင့်မတ်လာတယ်။ ကွေ့ယိုင်လာတယ်။ တယောက်ချင်းမှာ မူတည်နေတယ်။ အားလုံးမှာ မူတည်နေတယ်။ အဲဒီတုန်းက မျှော်လင့်ချက်တွေကတော့ ဘယ်သူမှ မလျော့ခဲ့ကြပါဘူး။ ကိုယ့်အမိမြေအတွက် အခုအချိန်ကနေ မျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့ နောင်လာဦးမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွက်ရော…။
မသက်ဝေ တက်ဂ်ထားတဲ့ နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ရေးမယ်ဆိုပြီး ဂျွန်လ လောက်က အကြမ်းရေးထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အတွေးတွေက ပြန့်သွားလို့ ဆက်မပြင်ဖြစ်ခဲ့။
အခုတလော သဘာဝဘေးဒဏ် ခံရတာတွေ ဆက်တိုက် ကြားနေရတယ်။ အာတိတ် ရေခဲပြင်ကြီးဟာ လာမယ့် အနှစ်၂၀ အတွင်းမှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလည်း ဖတ်ရလေရဲ့။ ကမ္ဘာကြီးက ပူနွေးလာတယ်။ ဂေဟစနစ်ကို မှီခိုနေကြတဲ့ သတ္တ၀ါတွေ ဒုက္ခရောက်၊ ပြီးရင်တော့ ပြင်းထန်လာတဲ့ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမှာ အနှစ် ၂၀ အတွင်း ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မှာပါလိမ့်။
၂၀၁၂ လို့အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ကြီးကတော့ ရုံတင်ဖို့ တာစူနေပြီ။ မာယာလူမျိုးတွေရဲ့ ပြက္ခဒိန်အရတို့၊ တခြား နက္ခတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ တွက်ချက်မှုအရတို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ၂၀၁၂ ဒီဇင်္ဘာ ၂၁ မှာ အပြီးတိုင်အခြေအနေ ရောက်တော့မယ်လို့ ကောလဟလ တွေလည်း ကြားနေရလေရဲ့။ မှန်မယ်ဆိုရင်တော့လည်း ၃နှစ်ပဲ လိုတော့တာ ပဲလေ။ အနှစ် ၂၀ အထိ လှမ်းမျှော်ဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူး။ ခေါင်းစား သက်သာတယ်။ ၃ နှစ်အတွင်း ပျော်သလို နေလိုက်ကြရုံပဲ။
အခုတလောမှာတော့ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘဲလ်ဆု ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆူညံဆူညံတွေလည်း ကြားနေရလေရဲ့။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ပိုက်ထားရတဲ့ အိုဘားမားဟာ အကျပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဘောင်ခတ်ခံလိုက်ရတာလား။ နောက်အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ အမေရိကန်က စူပါပါဝါကနေ ကျဆင်းလာမယ့် အကြောင်း တွက်ချက်မှုတွေ ပိုမှန်လာမယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်။ မဇီဇ၀ါ ဘလော့ဂါမှာ ရေးထားတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကျဆင်းလာတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကလည်း ပံ့ပိုးပေးနေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဒီမိုကရေစီစနစ် အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ် ဆိုတာတွေ နောက်လာမယ့် အနှစ်၂၀မှာ ဘယ်အခြေအနေ ဆိုက်ရောက်နေမလဲ။ သမိုင်းဘီးဟာ လည်ပတ်နေတယ် လို့တော့ ကြားဖူးခဲ့တယ်။
အနှစ်၂၀ ဆိုတာ လူတစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ ဘ၀တွေကိုလည်း အဆိုးအကောင်း ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ လုံလောက်တဲ့ ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အိုဟင်နရီရဲ့ နာမည်ကြီးဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ After twenty years ကိုလည်း သတိရသွားမိတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ အနှစ် နှစ်ဆယ် ကြာတဲ့အခါ ပြန်တွေ့ကြမယ် လို့ နေရာတခုမှာ ချိန်းထားခဲ့တယ်။ ပြန်တွေ့တဲ့အခါ တစ်ယောက်က ရဲ၊ တစ်ယောက်က တရားခံပြေး ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အကြောင်း လှပတဲ့ အဆုံးသတ်နဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ နောက်အနှစ် ၂၀ မှာ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲ။ ဘ၀တွေ ခြားနားသွားတာလည်းရှိမယ်။
နောင်လာမယ့် အနှစ် ၂၀ မှာ ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘ၀က ဘယ်လိုနေမလဲ။ ဘယ်မှာ နေထိုင်နေကြမလဲ။ စီမံကိန်း ချဖို့ ခက်ခဲနေသေးတယ်။ လူတိုင်းလိုလို ပြောနေကြသလိုပဲ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်ချင်တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ ကိုယ်က မိန်းမကြီးအရွယ် ဖြစ်သွားပြီ။ သာမန်သက်တမ်းစေ့ နေရမယ် ဆိုရင်တော့ မသေလောက်သေးဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် အိုစ နာစပြုနေပြီပေါ့။ သားသမီးရှိရင်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးက အသက်၂၀ မပြည့်သေးဘူး ဆိုတော့ လက်မလွတ်လောက်သေးဘူး။ ပညာရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးရဦးမယ့် အရွယ် ဖြစ်နေနိုင်သေးတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်က စောစောစီးစီး နားလို့ မရလောက်သေးဘူးပေါ့။
အနှစ်၂၀ အတွေးကတော့ ဟိုရောက်ဒီရောက်ပါပဲ။ မောစရာတွေက များနေတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်ပိုင်ဘ၀အတွက်၊ ကိုယ့်အမိမြေအတွက်၊ အားလုံးနေထိုင်ကြတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် မျှော်လင့်ချက် ခပ်ဝါးဝါးနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ကြရဦးမှာပဲ။ Wall-E ရုပ်ရှင်ထဲက စကားလေး သတိရသွားပြန်တယ်။ I don’t want to survive. I want to live. တဲ့။
(ဘလော့ဂ်ထဲမှာတော့ ဒီအကြောင်းက တော်တော်များများ ရေးပြီးသွားကြပါပြီ။ မြို့မေတ္တာခံယူတဲ့ ကိုပေါ ကို ထူးထူးခြားခြား တက်ဂ်ချင်စိတ် ပေါက်နေတယ်။ ရေးဗျာ။ ၂ ရက်အတွင်း။)
Posted by pandora at 2:52 PM 22 comments
တက်ဂ်ကြွေး ၂ ခု ကျန်နေရတဲ့အထဲ ကိုဆောင်းယွန်းလ က သီချင်းတွေအကြောင်း ထပ်တက်ဂ်ပါတယ်။ ရေးမယ်လို့ ပြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေ့ကလူတွေ ရေးခိုင်းထားတာ မရေးပဲ ကျော်ရေးနေတာ များလှပြီဆိုတော့ ခဏ ဘရိတ်အုပ်လိုက်တယ်။ မသက်ဝေ တက်ဂ်ထားတဲ့ နောင်လာမယ့်အနှစ်နှစ်ဆယ် ဆိုတာကို ခက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ လုပ်နေပေမယ့် နှင်းဆီနက် ရေးခိုင်းထားတဲ့ ၀ါသနာ ဆိုတာကတော့ ရေးရခက်တယ် ပြောလို့ မသင့်ဘူးမဟုတ်လား။
ဘလော့ဂ် လာဖတ်ကြည့်တာနဲ့ကို ဘာဝါသနာပါသလဲ ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါပြီ။ စာရေးတာ ကဗျာရေးတာ ၀ါသနာပါတယ်။ ပုံဆွဲတာကို မတတ်မတတ်နဲ့ တို့တို့တိတိ လုပ်တယ်။ အော်တိုကင်မရာလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။
အားကစားကိုတော့ ဘောလုံးပွဲ တင်းနစ်ပွဲ ကြည့်ဖို့လောက်ပဲ ၀ါသနာပါပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ကစားဖို့ ၀ါသနာမပါပါ။ ပျင်းတာက တကြောင်း ကိုယ်ပင်ပန်းသွားမှာ စိုးတာက တကြောင်းဖြစ်မယ်။ ဒီပုံအတိုင်း ဆက်သွားရင်တော့ တော်တော်လေး ၀ လာစရာ ရှိတယ်။ အလှပျက်မှာ ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့တော့ လမ်းလျှောက်တာလောက် စက်ဘီးစီးတာလောက် နည်းနည်း ပြန်လုပ်ကောင်း လုပ်မယ်။ ကလေးတုန်းကတော့ ကြက်တောင်လေးဘာလေး ရိုက်ခဲ့သား။ အဲလို ကစားပွဲဆန်ဆန် အားကစား ဆိုရင်တော့ ပိုစိတ်ပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကစားဖို့ အဖော်မရှိပြန်ဘူး။ (ဒါလည်း အကြောင်းပြချက်ပေါ့။) စလုံးမှာ နေသူတွေရဲ့ ဘ၀အတိုင်း ညနေဆိုရင် ရုံးဆင်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိုးချုပ်နေပြီဆိုတော့ အချိန်မရတာလည်း ပါတယ်။ ညနေစာစားဖို့ ဗိုက်ကလည်း ဆာနေပြီ။ ရေကူးတာ မတောက်တခေါက် တတ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ မကူးတာကြာလို့ မေ့နေပြီ။
ချက်တာပြုတ်တာ ၀ါသနာပါပါတယ်။ စားမယ့်သူ ရှိတယ် ဆိုရင် စိတ်ပါလက်ပါ ချက်ပါတယ်။ မြန်လည်းမြန်တတ်တယ်။ သိပ်ပြီး ထူးထွေဆန်းပြား အစားအသောက်တွေတော့ မချက်တတ်ပါ။ ကြုံရင်သင်ဖို့တော့ ၀န်မလေးပါဘူး။ ရှင်းတာလင်းတာကတော့ အောင်မှတ်ရရုံလေး လုပ်ပါတယ်။ ၀ါသနာမပါပါ။ ပန်းအိုးထိုးနည်း သင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် အထူး ၀ါသနာပါတယ်လို့တော့ မပြောနိုင်ဘူး။ သိုးမွေးထိုးတာ တစ်ချောင်းထိုး နှစ်ချောင်းထိုး ထိုးခဲ့တဲ့အချိန်တွေ ရှိတယ်။ အင်္ကျီတွေ အတော်များများ ထိုးခဲ့ပါတယ်။ လုပ်နေတုန်းကတော့ ၀ါသနာပါနေတာပေါ့လေ။ အခုတော့လည်း အဲဒါတွေ လှည့်မကြည့်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။
ကလေးကတည်းက ပုံဆွဲတာနဲ့ စန္ဒရား တီးတာကို သင်ချင်ခဲ့တယ်။ သင်ဖို့ အခွင့်မသာခဲ့ဘူး။ အခု ဒီမှာကျတော့လည်း သင်တန်းတွေ တွေ့ပါတယ်။ အချိန်တွေ ပိုက်ဆံတွေသုံးရမှာ တွန့်နေသေးတယ်။ ပုံဆွဲတာကို ဆေးတွေ ဘယ်လိုသုံးရလဲ နည်းလမ်းတွေ သိပ်မသိပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ သက်ဆိုင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ်တွေ စာအုပ်တွေ ပေးကြပါတယ်။ အခုအထိတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆွဲချင်သလိုပဲ ဆွဲနေသေးတယ်။ ဆေးနည်းနည်းပါးပါး ၀ယ်ထားတယ်။ ကွန်ပြုတာနဲ့ မောက်စ်နဲ့ ဆွဲဖြစ်တာများတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ မျဉ်းတွေရအောင် မောက်စ်နဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ လိုက်ချိန်ဆွဲရတာကို သဘောကျ နေသေးလို့။ ဓာတ်ပုံလည်း နည်းပညာကို မတတ်ပါ။ ကြည့်ကောင်းတယ် ထင်သလို ကြုံရင် ရိုက်တာလောက်ပါပဲ။
သီချင်းကတော့ နည်းနည်းပါးပါး နားထောင်ပါတယ်။ ရင်ထဲထိတဲ့ သီချင်းတွေဆို တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ တစ်ပုဒ်တည်းကို တစ်နေ့လုံး နားထောင်ရင် ထောင်နေတတ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယို ကြည့်တာကတော့ ၀ါသနာ ဆိုတာထက် အများသူငါလို အပန်းပြေ ကြည့်တာလောက်ပဲလို့ထင်ပါတယ်။ စစ်ကားတွေ documentary ဆန်ဆန် တကယ့်အဖြစ်အပျက် နောက်ခံတာတွေ ကြိုက်တယ်။ romantic comedy လေးတွေနဲ့ animation ကာတွန်းကားလေးတွေကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းကို တောက်လျှောက် ၀ါသနာပါပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မဂ္ဂဇင်း ကာတွန်း ၀တ္ထု တွေ့သမျှ စာအပိုင်းအစ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့ ရောက်နေရင် ဖတ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တယ်။ ဖတ်လိုက်ရင်လည်း တလောကလုံး ဘာတွေဖြစ်နေနေ မသိတော့ဘူး။ ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ဆိုတာ တကယ်ပဲ။ လူကြီးတွေဆူတာ ခံရတာ ခဏခဏပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုကြီးလာတော့ စာဖတ်တဲ့အခါ သိပ်အာရုံမစူးစိုက်နိုင်တော့ဘူး။ ဖတ်နေရင်းနဲ့ အတွေးတွေ များတယ်။ ဘာဖတ်နေပါလိမ့် မေ့သွားတယ်။ ဖတ်မပြီးသေးတဲ့ တန်းလန်းစာအုပ်တွေ အများကြီးပဲ။ ရသစာတွေ အပြင် စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး စီမံခန့်ခွဲရေး သီအိုရီတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ တက်ကျမ်းတွေတော့ သိပ်မဖတ်ဖြစ်ပါ။
စာရေးတာကိုတော့ စွဲမြဲ လုပ်ဖြစ်နေသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် ကဗျာတွေကို ပိုရေးဖြစ်ပါတယ်။ မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့။ အခုထိတော့ ၀ါသနာအလျောက်ပါပဲ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာရေးဆရာတော့ ဖြစ်မလာဘူး။
၀ါသနာ ဆိုတဲ့ တကယ့်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တခုခုမှာ စိတ်ပါလက်ပါဖြစ်ပြီး အစဉ်တစိုက် လုပ်ဖြစ်ခြင်း လို့ထင်ပါတယ်။ ထူးချွန်တာ မထူးချွန်တာကတော့ တစ်ကဏ္ဍပေါ့လေ။ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ပညာရေးစနစ်ရယ် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရယ်က ကျောင်းစာပြင်ပ ၀ါသနာတွေကို ဘယ်လောက်အားပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာမှာ မူတည်မယ်။ ၀ါသနာတွေကို စနစ်တကျ လိုက်စားဖို့ အချိန်ငွေကြေး ပံ့ပိုးမှုတွေ တတ်နိုင်မတတ်နိုင်နဲ့လည်း ဆိုင်မယ်။ အင်း.. ပြောတာတွေလည်း များသွားပြီ။ အကြောင်းပြချက်တွေကလည်း များလိုက်တာနော်။ ဆင်ခြေဆင်လက် ပေးရတာ ၀ါသနာပါတယ်လို့လည်း ကောက်ချက်ချနေကြပါဦးမယ်။
Posted by pandora at 5:47 PM 15 comments
Posted by pandora at 1:05 AM 15 comments
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ မKOM က “ပုလင်းတစ်လုံးရဲ့ story” ဆိုလို့ “ပုလင်းများစွာရဲ့ story” ကို ဖတ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကူးသရုပ်ဖော်ကြည့်လို့ရအောင် တင်လိုက်တာပါ။
ပုံကြည့်တာနဲ့ မူးတဲ့ရသ ခံစားရမလားလို့ ခင်းကျင်းကြည့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by pandora at 8:16 PM 21 comments
တစက္ကန့်ချင်း တလှုပ်လှုပ် ငုတ်တုတ် စောင့်
ချောက်.. ချား.. စရာ
ဂြိုလ်ပြာပေါ်က တောက်လောင် ပေါက်ကွဲသံများ
အညစ်အကြေးတွေကို သူ့ကျောပေါ်က လှုပ်ခါချချိန်
သွေးရူးသွေးတမ်း ဒဏ်ရာတွေ ယားယံရောင်ရမ်းချိန်
ရောဂါပိုးမွှားတွေက တမြို့ပြီး တမြို့ သိမ်းပိုက်လာခဲ့
ကုထုံးတွေ ဆေးဝါးတွေ ချွေးဒီးဒီးကျ
တဖျစ်ဖျစ် တာစူနေသော ချော်ရည်ပူများ
လေပြင်းတွေ လှိုက်ဖိုငိုရှိုက် မှုတ်ထုတ်
ရေလှိုင်းတွေ အငန်းမရ ချီတက်ဝါးမျို
မြေကြီးတွေ ကွဲအက် တုန်ခါ ပြတ်ရွေ့
ပြောင်းလဲလာပြီ ပူပြင်းလာပြီ ပျော်ကျလာပြီ
တံပိုးခရာတွေ စူးစူးရှရှ တွန်မြည်သံ
ကစဥ့်ကလျား ပြေးကြလွှားကြ တက်နင်းကြ တွန်းတိုက်ကြ
နစ်မြုပ်ကြ လဲပြိုကြ ကြေမွပျက်စီးကြ လှောင်ပိတ်ကျန်ရစ်ကြ
ဘယ်သူ့ကိုမှ မကမ်းလှမ်းနိုင်တော့ဘူး.. တဲ့
အကျိုးစီးပွား နျူကလီးယားလက်နက် အာဏာစက်
လောင်စာအပြည့်နဲ့ ကျိန်စာတွေ နှောင်ခတ်ထားပြီ
လူတွေ လုပ်မိလို့ မှားတဲ့အမှားတွေနဲ့
လူတွေ မလုပ်မိလို့ မှားတဲ့အမှားတွေနဲ့
တကယ်တမ်း ဖောက်ပြန်နေတာ သဘာ၀၀န်းကျင် ဟုတ်ရဲ့လား
ဘိုးဘေးတွေက ကမ္ဘာကြီးကို အမဲလိုက်ခဲ့တယ်
သားမြေးတွေက ကမ္ဘာကြီးကို အမဲဖျက်ခဲ့တယ်
အခုတော့လည်း သန်းပေါင်းခြောက်ထောင် သားကောင်တွေဖြစ် လို့။
Posted by pandora at 12:14 PM 20 comments
ကိုယ်ကပဲ ထင်လို့လားမသိ။ ဘလော့ဂ်သက်ကလေး အတော်ရလာသူတွေ ရေးတာ နှေးကွေးလာတာကို တွေ့ရတယ်။ (ကိုယ်တိုင် ပို့စ်တင်ကျဲတာနဲ့ အမှုတွဲလိုက်တာ။) မကေ ကတော့ပြောဖူးတယ်။ ဘလော့ဂ်မှာ အတက်အကျ အချိန်တခုရှိတယ် ဆိုတာမျိုး။ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ တစိတ်တပိုင်း မှန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်ကလည်း အပြင်လောကမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက် ပိုလာတဲ့ တာဝန်တွေ လုပ်စရာတွေက အချိန်ကို မလောက်မင ဖြစ်လာစေတယ်။
တချိန်က စာတွေ အများကြီးရေးခဲ့တဲ့ ဂျစ်တူးကတော့ ဘလော့ဂ်ကို ဆက်မရေးတော့ပဲ ပိတ်လိုက်တာ ကြာပြီ။ ဟိုတလောကတော့ မသက်ဝေ ဘလော့ဂ်မှာ ဘလော့ဂ် ဆက်ရေးနိုင်အောင် အချိန်တွေကို နေရာချဖို့အတွက် မျက်နှာစာအုပ် (facebook) ထဲက အလှမွေးအကောင်လေးတို့ လယ်စိုက်တာတို့ကို ဖြတ်တယ် ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ပန်ဒိုရာကတော့ မျက်နှာစာအုပ်မှာ အချိန် သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီဘက်မှာ အထူး ဖြတ်တောက်စရာ မရှိပါ။ GTalk မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောတဲ့ အချိန်တွေကို နေ့ဘက်ရော ညဘက်ပါ ဖြတ်တောက်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
အလုပ်ချိန်ထဲမှာ GTalk လို MSN တို့လို တမဟုတ်ချင်း ဆယ်သွယ်စကားပြောလို့ရတဲ့ messenger တွေကို ဖွင့်ထားနိုင်တာတို့ အင်တာနက်ကို သုံးစွဲခွင့်ပြုတာတို့ ဟာ (အလွန်အကျွံမသုံးရင်) ၀န်ထမ်းတွေကို ထုတ်လုပ်မှု ပိုစေတယ် ဆိုတဲ့ စစ်တမ်းတခုကိုလည်း ဟိုတလောက ဖတ်မိပါတယ်။ အိပ်မငိုက်အောင်တို့ စိတ်ကျေနပ်မှုရတာတို့ကြောင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဘလော့ဂ်ထဲမှာ တွေ့ဆုံကြတဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးသူ အချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်သူတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အပြန်အလှန် တမဟုတ်ချင်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ချိတ်ဆက် ပြောဆိုမိကြတဲ့အခါ တယောက်နဲ့တယောက် ပိုခင်မင်ကြ နားလည်ကြနဲ့ လူမှုရေးမှာ ပိုရင်းနှီးလာနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ နားလည်မှုလွဲပြီး ရန်ဖြစ်ကြတာမျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေသစ် ရှာသူများအတွက် ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရှိမှာပါ။
တကယ်က GTalk ကို ၀င်ချိန် နည်း-နည်းလာတာ လ နဲ့ ချီနေပါပြီ။ အခုတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ ပြောစရာရှိတဲ့အခါမျိုးက လွဲလို့ ဘယ် GTalk account ကိုမှ log in (လုံးဝ) မ၀င်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ မတွေ့ရင် စိတ်မပူပါနဲ့။ ကိစ္စရှိရင် email ပို့လို့ရပါတယ်။ တနေ့ တစ်ကြိမ်တော့ email စစ်ဖြစ်မှာပါ။ အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က စာရေးဝါသနာပါလို့ ရေးထားတာတွေကို သူများတွေ ဖတ်လို့ရအောင် အလကားလည်းရ လွတ်လည်းလွတ်လပ်တဲ့ နေရာမှာ လာတင်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တခုခုရေးဖြစ်တဲ့အခါ ပို့စ်အသစ် တင်ပါမယ်။ တခြားဘလော့ဂ်တွေကို ဖတ်တဲ့အခါလည်း မှတ်ချက်ရေးစရာရှိရင် ရေးသွားမှာပါ။ အလည်အပတ်တွေမှာ ခြေရာချန်တာ နည်းသွားမယ်ဆိုရင် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားကြမယ်။ လမ်းကြုံရင် လာဖတ်ပေါ့နော်။
Posted by pandora at 10:55 PM 22 comments
အပြာရောင်ကျွန်း - ၂
တွမ်ဟန့်စ်က ၀ီလဆင်ကို ဖက်ထားခဲ့တယ်
တွမ်ဟန့်စ်က ဘောလုံးလေးကို ဖက်ထားခဲ့တယ်
ဂျွန့်မှာ ကွဲအက်ရှတ အော်ဟစ်ရတယ်
စင်ရော်တစ်ကောင် သုတ်ခနဲ နားသွားတိုင်းလည်း
ငါက သင်္ကေတတွေ ပို့ပို့ပေးနေတတ်တယ်
သူတို့ ငါ့ကို လိုက်ရှာနေလောက်ပြီ
ဟိုမှာ ရွက်တိုင်တွေ မြင်နေရပြီ
ဟိုမှာ ငါ့အချက်ပြမီးကို တွေ့သွားသလား
ဟိုမှာ ဥသြမှုတ်သံ ကြားရပြီ
သင်္ဘောက ကျွန်းဆီဦးမတည်ပဲ ကပ်ကွေ့သွားတယ်
သင်္ဘောက သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း ငဲ့မကြည့်ဘဲသွားတယ်
လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်မြောက်လိုမှုကို မဖတ်တတ်ဘူး
သင်္ဘောက ပင်လယ်ဓားပြတွေချည်း ပါလာလို့
ငါ့ကိုကယ်မှာမဟုတ်တဲ့ သူတွေ ထိုးဆိုက်ကြ
အပုပ်ကောင်တွေပဲကျန်လို့ ပင်လယ်ထဲ ပစ်ပစ်ချရတယ်
သမုဒ္ဒရာရဲ့ နိယာမကလည်း ကမ်းစပ်ကို ပြန်ပုတ်ထုတ်ပြန်တယ်
သူတို့ရူးသွပ်နေကြတဲ့ ရတနာပုံထဲ ထိုးဖွရင်း
ဒါက ချစ်သူနဲ့ပြန်တွေ့ရင် လည်မှာဆွဲဖို့
ဒီလိုပဲ တနေ့ တနေ့
(အပြာရောင်ကျွန်း - ၁ ဖတ်ရန်)
Posted by pandora at 12:11 AM 23 comments
သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ (3108) ကို ဘလော့ဂ်ဒေး ဘလော့ဂ်နေ့ လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဒီလို သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာ ၅ နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဘလော့ဂ်ဒေး လို့ ထူထောင်ခဲ့ကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နေရာအသီးသီးက စိတ်ဝင်စားမှုချင်းတူတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ အချင်းချင်း သိကျွမ်းခင်မင်ကြရအောင် လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ဘလော့ဂါတွေက ကိုယ့်စာဖတ်သူတွေကို တခြားဘလော့တွေကို သွားဖတ်ရှုဖို့ ရည်ညွှန်းထောက်ခံပေးပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မသိခဲ့ဖူးတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို ချိတ်ဆက်ဖတ်ရှုသွားနိုင်စေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘလော့ဂ်ဒေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ် ရေးတဲ့အခါမှာ ညွှန်ကြားထားတာလေးတွေကတော့
၁) ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘလော့ဂ် ၅ ခုကိုရှာပါ။
၂) အဲဒီဘလော့ဂါ တွေကို ကိုယ်က ရည်ညွှန်းမယ့်အကြောင်း အကြောင်းကြားပါ။
၃)အဲဒီ ဘလော့ဂ်တွေအကြောင်း အတိုကောက် ဖော်ပြပြီး လင့်ခ် ပေးထားပါ။
၄) ၃၁ ရက် သြဂုတ်လမှာ ပို့စ်တင်ပါ။
၅) ဘလော့ဂ်ဒေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒီ လင့်ခ်တွေကိုလည်း တင်ပေးပါ။ http://technorati.com/tag/BlogDay2009 andalink to the BlogDay web site at http://www.blogday.org
ပန်ဒိုရာအနေနဲ့ကတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ အချိန်အခက်အခဲကြောင့် ဘလော့ဂ်တွေကို လိုက်ဖတ်ဖြစ်တာ လျော့သွားခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် မှတ်ချက်ရေးတာ လျော့သွားတယ်။ ဘလော့ဂ် အသစ်တွေလည်း အများကြီး ပေါ်လာပါတယ်။
အခုညွှန်းတဲ့နေရာမှာ နာမည် အတော်ကြီးပြီးသား ဘလော့ဂ်တွေ (ဥပမာ မနော်ဟရီ တို့လို ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ သတင်းဘလော့ဂ် တို့လို) မျိုးကို ကိုယ်နှစ်သက်ပေမယ့် အထူးတလည် မညွှန်းချင်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုပြောလို့ အခုညွှန်းမယ့် ဘလော့ဂ်တွေကိုလည်း နာမည်မကြီးဘူးလို့ ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘလော့ဂါအသစ်တွေ ဒါမှမဟုတ် အခုမှ ဘလော့ဂ်ကို စဖတ်မိကြတဲ့ စာဖတ်သူအသစ်တွေ တကယ်လို့များ မသိခဲ့သေးရင် ဖတ်ကြည့်နိုင်အောင်ပါ။ ဘလော့ဂ်ရဲ့ သဘာဝက သူ့လည်ပတ် ကိုယ့်လည်ပတ် လူမှုရေးတွေ အခြေပြုပြီး သွားလာဖတ်ရှုလေ့ ပိုရှိကြတာမို့ အသွားအလာ အေးဆေးတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို အဓိကထားပြီး ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ညွှန်းချင်တာက ဘလော့ဂ်တွေ ပေါ်ခါစ အချိန်ကတည်းက အစဉ်အစိုက် မြန်မာစာပေ အထူးသဖြင့် ရိုးရာကဗျာတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ရေးခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ် တစ်ခုပါ။ နောက်တော့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဘလော့ဂ်ရေးတာကို ခဏ ရပ်ထားပါတယ်။ အခုတော့ ပြန်ရေးနေပါပြီ။ သူပြန်ရေးတာကို အထူးတလည် မကြော်ငြာတဲ့အတွက် သိချင်မှ သိကြမှာမို့ ညွှန်းလိုက်တာပါ။ ပို့စ်အဟောင်းရော အသစ်တွေကိုပါ အချိန်ယူဖတ်သင့်တဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခုကလည်း ကဗျာဘလော့ဂ်ပါ။ သူရေးတဲ့ ကဗျာတွေကို နှစ်သက်ပါတယ်။ သူကလည်း အသွားအလာနည်းပါးတယ်။ နာမည်ကလည်း အမည်မဲ့တဲ့။ ပျံ့လွင့်နေသော တေးနှင့် ဧကစာရီ ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်ပါ။ တခြားဆရာတွေရဲ့ ကဗျာတချို့ကိုလည်း တင်ထားပါတယ်။
နောက်ဘလော့ဂ်တခုကတော့ ဇီဇ၀ါပါ။ သူကတော့ ဗဟုသုတရစရာတွေ အတွေးအခေါ်တွေကို ရေးလေ့ရှိတယ်။ သူများ ဘလော့ဂ်တိုင်းမှာ မှတ်ချက်တွေ လိုက်ရေးခဲတယ်။ ရေးရင်တော့လည်း စာကို အသေအချာဖတ်ပြီး အလေးအနက် ရေးလေ့ရှိတယ်။ သူ့ပို့စ်တိုင်းမှာ တွေးစရာတခုခု ရလိမ့်မယ် လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် Education for Myanmar ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်ကိုလည်း ညွှန်းချင်ပါတယ်။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မခင်မမမျိုး၊ ဆရာဦးသိန်းနိုင်၊ S.S စတဲ့ စာရေးသူ အတော်များများ ပါဝင်ကူညီထားကြပါတယ။်
နောက်ဆုံး ညွှန်းချင်တာက အမှတ်တမဲ့နှင်း ဆိုတဲ့ ကဗျာဘလော့ဂ်အသစ် လေးပါ။ ရေးသူတွေကတော့ ပြည်တွင်း မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ရေးနေကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေပါ။ လောလောဆယ်တော့ ပို့စ်သိပ်မများသေးပါ။ နောက်တော့ ပို့စ်တွေ ပုံမှန် တင်လာမယ် ထင်ပါတယ်။ မင်းစိုးရာ၊ ဘုန်းနေသွန်း၊ အောင်ပိုင်စိုး တို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံး အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂ်နိုင်ကြပါစေ။
(ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်တွေကို ဒီပို့စ်တင်တဲ့အချိန်မှာပဲ အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ ကြိုမပြောဖြစ်တာ ဆောရီးပါ။)
Posted by pandora at 10:10 PM 12 comments
Posted by pandora at 12:53 AM 22 comments
ဆောင်းတွင်းရဲ့ ဒုတိယလှိုင်း ရောဂါကပ်မှာ
ချစ်… ရွှင်… သနား ဘာညာသာရကာများ
နှစ်ဆယ့်သုံး နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဂရီ တိမ်းစောင်းနေလို့
ခေါင်းကနေ ဆွဲနှစ်ခံထားရတဲ့ ငရဲသားတွေက
ဘွားကနဲ ဘွားကနဲ ထထအော်လို့
ကျန်စစ်သားကို စောလူးမင်းက ဆေးလိပ်ဖွာမပျက်ဘဲ
ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းပေါ့ လို့ပြောလိုက်မှတော့
လက်တွေကို ဆပ်ပြာနဲ့ စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောပါ
လက်ခုံ လက်ဖမိုး လက်ဖ၀ါး
လက်ဖျားထိပ် လက်ခွကြား လက်ဖနောင့် မကျန်အောင်
အရေပြား အသွေးအသား အရိုးအကြော အဆီအရွတ် မကျန်အောင်
ဖိနပ်တိုက်တဲ့ လက်တွေလည်း လက်ဆေးပါ
သေနတ်ပိုက်တဲ့ လက်တွေလည်း လက်ဆေးပါ
အကြံပိုင်တဲ့ လက်တွေလည်း လက်ဆေးပါ
အလံကိုင်တဲ့ လက်တွေလည်း လက်ဆေးပါ
လမ်းထိပ်မှာ အမှိုက်ပုံဖွနေတဲ့ ဂျလေဘီလေး လက်ဆေးပါ
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲက မုန့်လက်ဆောင်းသည် အဒေါ်ကြီး လက်ဆေးပါ
ဗိုက်ထဲမှာ မမွေးရသေးတဲ့ ငါ့တူမကလေး လက်ဆေးပါ
မိုင်ရာထောင်ချီ အကွာအဝေးက ငါမမြင်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ လက်ဆေးပါ
သမ္မတကြီး အိုဘားမား ခင်ဗျားလည်း လက်ဆေးပါ
အချစ်ရေ လက်တွေကို ဆေးကြောပါ
စင်ကြယ်တဲ့ လက်တွေကို ရှိုက်နမ်းလာမယ့်
ကမ္ဘာမြေရဲ့ ပလေတိုးနစ် မေတ္တာကို စောင့်ရင်း
ပန်ဒိုရာလည်း ကဗျာရေးတဲ့လက်တွေ သန့်စင်အောင် ဆေးကြောဖို့ လိုနေသေးတယ်။ Alright! See you.)
Posted by pandora at 9:36 PM 28 comments
ကိုအောင်သာငယ် က ဘ၀ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆိုအမိန့်တွေ ရေးဖို့ တက်ဂ်ထားတာ ကြာပါပြီ။ တချို့ အဆိုအမိန့်တွေကို လိုက်ရှာ ရွေးချယ်ပြီး အနီးစပ်ဆုံး ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပေါ့ပါးနိုင်ကြပါစေ။ (ကျန်သူတွေရဲ့ တက်ကြွေးတွေလည်း ဆပ်ပါမယ်.. မျှော်..)
ဘ၀ဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ မလွယ်တာလေး တစ်ခုပါပဲ။
နေ့တစ်နေ့တိုင်းကို သင့်ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့လို သဘောထားပြီး နေထိုင်လိုက်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တစ်နေ့နေ့မှာတော့ အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဘ၀ဆိုတာ လိင်ကနေတဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပြီး သေနှုန်းကတော့ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်။
ဘ၀ဆိုက ကြက်သွန်နီလိုပါပဲ။ တစ်ကြိမ်မှာ အလွှာတစ်လွှာကို ခွာရတယ်။ တခါတလေတော့ ငိုရတယ်။
Life is like an onion. Why is life like an onion? Because you peel away layer after layer and when you come to the end you have nothing
ဘ၀က ကြက်သွန်နီနဲ့တူတယ်။ ဘာလို့လဲသိလား။ တလွှာပြီးတစ်လွှာ ခွာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာမှလည်း မရှိဘူး။
ဘ၀မှာ ၀မ်းနည်းစရာ ဇာတ်သိမ်း နှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက ကိုယ်လိုချင်တာကို မရလိုက်တာ။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်လိုချင်တာကို ရလိုက်တာ။
အရာရာတိုင်းကို စဉ်းစားအဖြေရှာလို့ရသွားပါပြီ။ ဘယ်လို အသက်ရှင်နေထိုင်ရမယ် ဆိုတာက လွဲလို့ပေါ့။
ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုတာ လူတစ်ယောက်က သူဘယ်လို နေထိုင်ခဲ့သလဲ လို့ သူထင်တာကို ရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါပဲ။
ဘ၀မှာ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ စားရိတ်တွေက တက်တက်လာတယ်။ ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေက ကျကျလာတယ်။
ဘ၀ဆိုတာ သဘောင်္တစ်စီးပေါ်ကို တက်ရသလိုပါပဲ။ အဲဒီသင်္ဘောက ပင်လယ်ကို ရွက်လွှင့်ပြီး နစ်မြုပ်တော့မှာလေ။
လောကကြီးက ဇာတ်ခုံပေါ့။ ငါတို့အများစုကတော့ သေသေချာချာ ဇာတ်မတိုက်ရသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဘ၀ဆိုတာက ရေပြင်ညီအတိုင်း ပြုတ်ကျခြင်းပဲ။
ဘ၀ဆိုတာကလည်း နေနေရတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားတာပဲ။
ဘ၀ကို နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်လေ။ ဆိုးဝါးတဲ့အပိုင်းရယ် ကြောက်စရာအပိုင်းရယ်။
(ဘာသာပြန်သူ။ ။ မြန်မာလို ပိုကြည့်ကောင်းအောင် စကားရှေ့နောက် ပြောင်းလိုက်တယ်။ ဆိုးဝါးတာနဲ့ ကောင်းတာများလားလို့.. ဟင်း..။)
ဘ၀ဆိုတာ တောထဲက တိရစ္ဆာန်ရုံပေါ့။
ဘ၀ဆိုတာ လှပတဲ့ သံစဉ်တေးသွားပါပဲ။ သီချင်းစာသားတွေကပဲ ပေါက်ကရဖြစ်နေတာပါ။
အသက်ရှင်နေထိုင်မှု (ဘ၀) ဆိုတာကို သိပ်ပြီး အလေးအနက် ထားမနေပါနဲ့။ နောက်တော့လည်း အသက်ရှင်ပြီး ထွက်သွားရတာမှ မဟုတ်တာ။
You live and you learn or you don’t live long.
အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီး သင်ယူပါ ဒါမှမဟုတ် ကြာကြာမနေရတော့ဘူး။
ဘ၀ဆိုတာ ကုမရတဲ့ ရောဂါ။
ဘ၀မှာ အလုပ်အတွက် အချိန်တွေရှိတယ်။ အချစ်အတွက် အချိန်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ တခြားအချိန်တွေ မကျန်တော့ဘူး။
ဘ၀ဆိုတာ အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့အခါ တခုခု ထလုပ်စရာပါပဲ။
ဘ၀မှာဆိုးတာကတော့ အမျိုးသမီးချောချောလှလှတွေ အများကြီးရှိပြီး အချိန်က နည်းလွန်းနေတာပဲ။
မနက်ဖြန်ပြီး နောက်တနေ့ (သဘက်ခါ) ဆိုတာ သင်ကျန်ရှိတဲ့ ဘ၀သက်တမ်း ကနေ စ ရေတွက်ရင် တတိယမြောက်နေ့ပေါ့။
ဒီမှာလေ.. သင်ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တစ်ခု ပြီးမပြီး စစ်လိုက်တဲ့ စာမေးပွဲ ပေါ့။ သင်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင် အဲဒီ အလုပ် မပြီးသေးဘူး။
ဘ၀ဆိုတာ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုပါ။ လူတိုင်း အသံထွက် မှားကြတယ်။
Christopher Morley, "Thunder on the Left"
နေထိုင်စရိတ်တွေ ဘယ်လောက်ကြီးကြီး အဲဒီ (ဘ၀ဆိုတာကြီးက) ပေါ်ပြူလာတော့ ဖြစ်နေသေးသားပဲ။
လူတွေက Life Quotes ဆိုတာကို (အင်တာနက်ထဲမှာ) ရှာတဲ့အခါ ဘ၀နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဆိုအမိန့်တွေကို ရှာကြတာပါ။ ဘာလို့များ သတင်း အချက်အလက်ရှာတဲ့ အဓိက search engines တွေက Life Insurance Quotes (အသက်အာမခံနှုန်းထား) ဆိုတဲ့ စီးပွားရေးကြော်ငြာတွေပါတဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေပဲ ရာနဲ့ချီပြီး ရှာပေးကြတာလဲ။
ပန်ဒိုရာ ကြည့်ကျက် ဘာသာပြန်သည်။
Posted by pandora at 2:52 PM9comments